Vaovao - Vokatra vaovao–System Spinal Pedicle Screw, PEEK Cages ary Lovia Mihidy amin'ny Radius Distal
Rafitra fantsika mifamatotra
Implants amin'ny hazondamosiko
Rafitra fitaovana ara-pitsaboana
Vokatra vaovao– 5.5mm System Spinal Pedicle Screw, PEEK Cages ary Distal Radius Locking Plates
Vokatra vaovao tonga!Vao haingana, misy vokatra vaovao mivoaka: kofehy roa 5.5mm spinal pedicle visy, Cervical PEEK Cages, TLIF PEEK Cages ary Distal Radius Locking Plates.
5.5mm hazondamosiko pedicle visy, toy ny 6.0mm screws, manana 4 karazana: monoaxial visy, monoaxial visy fampihenana, polyaxial visy sy polyaxial fampihenana visy mba hihaona amin'ny filana samihafa amin'ny fandidiana.Ary ny rafitra 5.5mm rehetra dia visy misy kofehy roa, ho an'ny taolana cortical sy cancellous.Ankoatra izany, ny tena visy dia loko, samy hafa loko manondro ny savaivony samy hafa, izay manampy ny dokotera haka ny tsara screw up mandritra ny fandidiana.
Ny endrika vaovao vozon-tranonjaza PEEK cage & TLIF PEEK cage:
Ny cages vozon-tranonjaza PEEK vaovao dia manana varavarankely grefy lehibe ho an'ny max.ny habetsahan'ny grefy, ny marika radiografika manome valiny hita maso ho an'ny fametrahana araka ny tokony ho izy sy ny endrika anatomika bebe kokoa.
Ny tranom-borona TLIF PEEK vaovao dia manolotra faritra lehibe hifandraisana mba hanamafisana ny fanohanan'ny vatan'ny vertebral ary hampihenana ny mety hisian'ny fihenam-bidy;miaraka amin'ny varavarankely grefy lehibe mamela ny faritra fandrakofana biolojika ambony indrindra ho an'ny fusion;ary ny géométrie lamina nify tsy manam-paharoa dia mety hanome fitoniana sy hanamaivana ny mety ho fandroahana.
Zoro isan-karazany Multi-axial Distal Radius Plam Locking Plate:
Ny endrika anatomika dia mifanentana akaiky amin'ny havoana volar miaraka amin'ny sisiny boribory mba hampihenana ny fahasosorana amin'ny tavy malefaka;
Ny lavaka tariby Kirschner ho an'ny fametrahana takelaka mialoha;
LCP Combi lava lava ho an'ny fametrahana takelaka sy fanitsiana ny halavan'ny radius;
Andry roa mamela ny tsy miankina contouring tsara ny radial sy intermediate tsanganana;
Lavaka visy manokana ho an'ny fametrahana ny styloid radial tsara sy ny fanohanana ny lafiny lunate sy ny radioulnar distal;
Ny lavaka LCP Combi dia mamela ny fametrahana visy hidin-trano miaraka amin'ny fitoniana angular ao amin'ny fizarana misy kofehy, na fanerena miaraka amin'ny visy cortex ao amin'ny faritra tsy misy kofehy.
Building 2A, H&B Hub, Science and Education City, Changzhou, Jiangsu, Sina